Boqortooyada Sacuudiga oo silac dishay maxbuus | RUUG-CADDAA
Maxbuus Sacuudiga ku xirnaaa ayaa la silac dilay, sida ay ku warrantay warbaahinta qaranka ee Sacuudiga.
Ninkan ayaa ka mid ahaa 37 ruux oo Talaadadii la daldalay iyaga oo loo haysto falal argagixisanimo.
Warka ay dawladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in raggan lagu helay “in ay qaateen afkaaro xagjirnimo, in ay abuureen shabakado argagixiso iyo in ay wax u dhimeen ammaanka iyo nabadgalyada bulshada”.
Mid ka mid ah dadka dilka lagu fuliyay ayaa jiray 16 sano oo kali ah markii la soo xirayay, sida ay sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International.
Dilalka sacuudiga laga fuliyo ayaa caadiyan dadka qoorta laga jaraa. Balse dadka oo la sii silac dilo waxay u gaar tahay dadka ay masuuliyiintu u arkaan in ay dambiyo waawayn galeen.
Dadka dilka lagu fuliyay Talaadadii ayaa ahaa kuwo lagu eedeeyay in ay weerareen xarumo laamaha ammaanka iyo in ay laayeen askar, sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SPA.
Xukunnadan dilalka ah ayaa lagu kala fuliyay goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin caasimadda Sacuudiga ee Riyaadh, Maka iyo Madiina.
Dadka xukunka dilka ah lagu fuliyay waxaa ka mid ah 14 ruux oo lagu helay dambiyo ay galeen intii ay ka qaybqaadanayeen mudaaharaadyo dawladda lagaga soo horjeeday, sida ay sheegtay Amnesty.
Sannadkii 2018 nin ayaa lagu silac dilay Sacuudiga ka dib markii lagu helay in uu haweenay toori ku dilay, Waxaa kale oo lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu nin kale dilo iyo in kufsi gaysto, sida ay ku warrantay warbaahinta Bloomberg.
Dawladda Sacuudigu si rasmi ah uma shaaciso tirada dadka ay xukunka dilka ah ku fuliso, balse warbaahinta dawladda ayaa si joogto ah u baahisa dilal la fuliyay.
Sida ay ku warramayso Amnesty ugu yaraan 104 ruux ayuu Sacuudigu dil ku fuliyay sannadkan aan ku jirno. Sannadkii horana boqortooyadu waxay dil ku fulisay 149 ruux.
Axaddiina dawladda Sacuudiga ayaa sheegatay in ay fashilisay weerar lagu bartilmaameedsanayay xafiis laamaha ammaanku ay leeyihiin oo ku yaalla al-Zulfi oo ku taalla waqooyiga Riyaadh.
« Daraasad lagu muujiyey dadka xogtooda la xadi karo iyo lambarrada ay adeegsadaan
Ka Boggo Igarre Iyo Dhacdo Qabsatay – VIDEO »